IMT Vislink sy ny fampisehoana miaraka amin'ny SpacePath at AfricaCom 2018 - NAB Show News by Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » News » IMT Vislink sy ny SpacePath Co-Exhibit ao AfricaCom 2018
IMT Vislink sy ny SpacePath Co-Exhibit ao AfricaCom 2018
CAPE TOWN, AFRIKA SOUTH, NOVEMBER 7, 2018 - xG® Teknolojia, Inc. ( "XG") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), izay fantany fa mpitarika eran-tany amin'ny serasera mivantana amin'ny fampielezam-peo, ny milisy sy ny governemanta, dia manambara fa ny orinasa IMT Vislink dia miara-manatrika ny SpacePath AfricaCom (Hall 4, Mijoroa amin'ny F21), ny hetsika lehibe sy manan-danja indrindra amin'ny haino aman-jery sy televiziona any amin'ny kaontinanta. IMT Vislink dia mampiseho ny Advent MSAT-120 zanabolana lahatsary sy data terminal ary ViewBack ambany fahaleovan-tsavoka diviziona receiver-decoder, raha ny SpacePath kosa dia maneho ny isan-karazany (HPA) sy ny ambaratonga matanjaka matanjaka (SSPA / SSPBs).
"AfricaCom dia manatevin-daharana ireo mpandray anjara 14,000 izay liana amin'ny fotodrafitrasa, ny teknolojia mampikorontana, ny serivisy nomerika sy ny tetikady ICT, izay mahatonga azy io ho fampisehoana lehibe ho antsika hanasongadinana ny zanabolana vokatra ho an'ny matihanin'ny indostria eo an-toerana ", hoy i David Robins, Talen'ny Sales Sales ho an'ny IMT Vislink. "Vislink dia manana laza malaza ho mpamatsy eran-tany zanabolana ny teknolojian'ny fifandraisana ary ny fanavaozana vao haingana amin'ny tsipika Advantista, dia manohy manome vahaolana azo itokisana, manara-penitra ary mahomby ho an'ity tsena ity. Amin'ny alalan'ny fampisehoana miaraka amin'ny SpacePath, dia hanana fahafahana ihany koa isika hampiseho ny fanolotra miaraka amin'ny vokatra miaraka amin'ny Advent MSAT-120 zanabolana Terminus."
Ny Advent MSAT-120 dia lanjan-java-manilikilika, mavesatra, ary tri-band zanabolana terminal izay afaka manangana na aiza na aiza mba hanomezana angon-drakitra sy tsy azo antoka ary ny fampitana lahatsary mandritra ny dimy minitra. Manohana ny fantsona X-, Ku- ary Ka-band izy io mba ahafahana mandrakotra ny fandrakofana maneran-tany amin'ny fotoana rehetra. Misy amin'ny 65, 90 na 120cm reflector, ny rafitra dia natao mba hampiasana haingana ny tontolo manodidina azy ary azo ampiasaina amin'ny haingam-pahefana na ny fiasan'ny batterie.
Ampidirina ao amin'ny terminal MSAT-120 ny Advent, SpacePath 60W 13.75-14.50GHz SSPA dia haseho amin'ny fampisehoana. Ary koa, SpacePath dia hanomboka vaovao vaovao 12W 13.75-14.50GHz Fanless SSPB. Tsy manana mpankafy amin'ny fananganana ny vokatra, ny SSPB tsy misy fanantenana vaovao dia mampitombo ny fahamendrehana maharitra eo amin'ny tarika ary manamaivana ny filana ilaina amin'ny fikojakojana tsy tapaka. Ny sehatr'asam-pampandrosoana mahery vaika ataon'ny PowerPath, izay ahitana ny fifandimbiasam-bondrona toa an'i C, Ku, DBS ary Ka dia hiseho koa.
"Ity hetsika ity dia manome antsika fahafahana manokana hanehoana ny vaovao zanabolana vokatra fanamafisam-peo sy sub-system any amin'ny faritra ", hoy i Colin Bolton, talen'ny SpacePath Communications. "Ny fiaraha-miasa amin'ny IMT Vislink dia mampiasa ny teknolojia farany avy amin'ny fikambanana roa."
Ny Vislink ViewBack dia lanjany ambany, ambany, ambany ary ambany, mpandoka-tsakafo roa-channel mpandahatra roa, natao voalohany indrindra hanomezana ny fandraisana indray ny famerenana ny horonan-tsary video niverina any amin'ny mpandraharaha mpaka sary. Miasa ao amin'ny andiam-pihariana 2GHz, ny mpanemotra dia manohana ny famolavolana ny famolavolan'i LMS-T an'i Vislink, ankoatra ny fametrahana ny famolavolan'ny famolavolana H.264. Anisan'ny vokatr'izany HDMI ary ny HDSDI, ny farany azo ovaina, amin'ny fampiharana fakantsary tsy misy fakan-tsarimihetsika, eo anelanelan'ny lahatsary fakan-tsary ao an-toerana sy ny famerenana ny lahatsary.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny IMT Vislink sy SpacePath, atsaharo ny Stand F21 ao amin'ny AfricaCom na tsidiho www.imt-solutions.com, www.vislink.com/ or www.space-path.com/.
About xG Teknolojia, Inc.
xG ny marika Teknolojia Wireless manome vahaolana mba handefa lahatsary, fampiharana ny lalàna sy ny fiarovana tsena, ary ny tsy miankina finday tambajotra haingam-pandeha noho ny fampiasana amin'ny tontolo sarotra. xG ny portfolio-dia ahitana marika Integrated Microwave Technologies (IMT), Vislink sy xMax.
IMT sy Vislink no mpamatsy mikarokarena haitao miavaka ho an'ny fakàna sary, famindrana sy fitantanana video azo antoka, avo lenta, mivantana. IMT sy Vislink dia mpamatsy azo itokisana amin'ireo mpanjifan'olom-pirenena 1 amin'ny fampielezam-peo / fanatanjahantena / fialam-boly, ary ny fampiharana ny lalàna / fampiroboroboana ny fiarovana / fiarovam-bahoaka. Ny vokatra ho azy dia ekena ho an'ny haavon'ny haavon'ny fahombiazana, ny fahamendrehana, ny fanamafisana ny kalitao, ny fari-piaramanidina manara-penitra ary ireo singa miavaka. Ao amin'ny fahitalavitra, sekta ara-panatanjahan-tena sy fialam-boly, IMT sy Vislink dia manome ny rohy mifototra amin'ny famolavolana avo lenta mba hanangonana sy hanaparitaka ny sarimihetsika mivantana. Ao amin'ny fampiharana ny lalàna, ny tsenan'ny fiarovam-bahoaka sy ny fiarovana, IMT sy Vislink dia manome vahaolana amin'ny alàlan'ny lahatsary azo antoka sy vahaolana amin'ny krizy amin'ny fikambanana sy fikambanana iraisam-pirenena. Misy fampahalalana bebe kokoa azo jerena ao www.imt-solutions.com ary www.vislink.com.
xMax dia azo antoka, haingana finday miisa haingam-pandeha-rafitra izay mamonjy asa fitoriana-antoka Wireless fifandraisana eo amin'ny tontolo mitaky miasa. xMax dia natao manokana mba ho ny expeditionary sy mitsikera ny fifandraisana Network for ampiasaina amin'ny tranga ampoizina mihitsy sy mandritra ny toe-javatra ranon-javatra. Izany no mahatonga azy ho vahaolana ho an'ny loza maharesy lahatra valiny, vonjy taitra fifandraisana, sy ny fangatahana fiarovana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny xMax azo hita ao amin'ny www.xgtechnology.com/system-overview/. Ankoatra ny raharaham-barotra amin'ny andalana etsy ambony, dia manana vita fanoloran-tena xG Federal Sehatra Group (xG Federaly) nifantoka tamin'ny fanomezana taranaka manaraka-karazany fizarana vahaolana ho fiarovana-pirenena, fikarohana siantifika sy ny fikambanana federaly. Fanampiny momba xG Federaly azo hita ao amin'ny www.xgtechnology.com/technology/xg-federal/.
Monina ao Sarasota, Florida, xG Teknolojia manana ny 100 Patents sy ny fampiharana eo am-piandrasana patanty. xG dia orinasa varotra ampahibemaso voatanisa ao amin'ny NASDAQ Renivohitra Market (symbol: XGTI) Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho www.xgtechnology.com.
Fanambarana fampitandremana momba Forward Mitady fanambarana
Fanambarana voarakitra etoana fa tsy mifototra amin 'ny marina ara-tantara amin'izao fotoana izao, na dia handroso tarehy eo amin'ny natiora sy ny mandrafitra ny handroso tarehy ao anatin'ny fanambarana ny hevitry ny Section 27A ny Fiarovana Act ny 1933 sy Fizarana 21E ny Fiarovana Exchange Act ny 1934. Toy izany hatrany tarehy fanambarana maneho ny Company ny andrasan'ny momba ny hoavy miasa vokatra, fampisehoana sy ny fahafahana izay Mitana anjara sy ny loza tsy ampoizina. Ireo fanambarana dia ahitana, fa tsy voafetra ho fanambarana momba ny natao teny avy amin'ny fanatitra, fanakatonana ny fanatitra sy ny fampiasana na dia avy amin'ny fanatitra. Rehefa ampiasaina Izao, ny teny hoe "mialoha," "mino," "Tombanana," "atsy ho atsy," "drafitra," "lasibatra", "nikasa" sy "manantena" sy ny teny mitovy amin'izany, raha mifandraika amin'ny xG Teknolojia, Inc. , ary koa ireo sampany, na ny fitantanana, dia natao mba hamantarana handroso tarehy toy izany fanambarana. Ireo handroso tarehy fanambarana dia mifototra amin'ny vaovao amin'izao fotoana izao natao ho amin'ny Company, ary manaiky ho maro loza mety hitranga, tsy azo antoka, ary ny antony hafa izay mety hahatonga ny orinasa tena vokatra, fampisehoana, fanantenana, sy fahafahana maha samy hafa ara-nofo avy ireo voalaza ao, na Te hilaza ny, ireo fanambarana nandroso tarehy.
fampitana injeniera fampitana Engineering IMT Vislink Spears & Arrows Video injeniera	2018-11-07
Previous: EditShare Media Solutions Power New LG U + Fanolorana ny "Show"